अन्तर्राष्ट्रिय Archives - Khula Patra
बुटवल । भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि अघिल्लो दिन नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारी लुम्बिनी आइसकेका थिए। लुम्बिनीका विभिन्न प्रवेशद्वारमा मोदीको स्वागतका लागि गेट तयार थिए। मायादेवी मन्दिर पनि चिटिक्क पारिएको थियो। बुद्धजयन्तीकै अवसर पारेर मोदीको लुम्...
एजेन्सी । रुसले युक्रनमाथि गरेको अतिक्रमणको विरोधस्वरूप विम्बल्डन २०२२ मा रुसी र बेलारुसी खेलाडीलाई सहभागिताबाट वञ्चित गरिएको छ । पुरुषतर्फ विश्व वरियतामा दोस्रो स्थानका रुसी खेलाडी डेनियल मेदवेदेव र महिलातर्फ विश्व वरियतामा चौथो स्थानका अरिना साबालेन्का यसबाट प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय...
द हेग । डच अदालतले बिहीबार एक वृद्ध अफगानी पुरुषलाई सन् १९८० को दशकमा काबुल जेलको कुख्यात हमलामा जिम्मेवार ठहर गर्दै युद्ध अपराधको लागि १२ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अब्दुल रज्जाक राफिफले ‘कैदीहरूलाई क्रुरतापूर्वक र अनादरपूर्ण व्यवहार गरेका र स्वेच्छाचारी ढङ्गमा उनीहरूलाई जेलमा दिइने स्वतन्त्...
कोलम्बो । श्रीलङ्का राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले सोमबार चार मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका छन्। राष्ट्रमा गम्भीर आर्थिक र राजनैतिक सङ्कटको बीचमा पु्रानो मन्त्रिमण्डलका सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो राजीनामा दिएपछि आएको स्थितिलाई सम्हाल्दै नयाँ मन्त्रीमण...
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको छ। नयाँ दिल्लीस्थित आईटीसी मौर्य होटलमा प्रधानमन्त्री देउवा र विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवासँग आजै भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भेट्ने कार्यक्...
यस्तो छ प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण तालिका
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबारदेखि तीन दिने भारत भ्रमणमा निस्किँदै छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको एक दिन अघि विस...
कहीँ नभएको जात्रा एनआरएनएमा, एउटै संस्थामा तीन अध्यक्ष
काठमाडौं । विदेशमा बसेका नेपालीहरू प्राय नेपालका राजनीति दल र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति वैराग्य व्यक्त गर्ने गर्छन् । उदाहरण दिँदै भन्ने गर्छन्- नेपालले फलानो देशबाट सिक्नुपर्छ । तर, लामो समय विदेश बसेका नेपालीहरूको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघभित्र भने नेपालका राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि गए गुज्र...
कूटनीतिक सम्बन्धमा सुडानसँग जोडियो नेपाल, १७५ देशमा सम्बन्ध विस्तार
काठमाडौं । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १७५ देशमा विस्तार भएको छ। नेपाल र गणतन्त्र दक्षिण सुडानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका देशको सङ्ख्या १७५ पुगेको हो। द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ...
चीनले नेपाललाई साढे ११ अर्ब अनुदान सहयोग दिने
काठमाडौं । चीनले नेपाललाई चिनियाँ युआन ६०० मिलियन (साढे ११ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल र चीनबीच शनिबार हस्ताक्षरित आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता अन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराइने भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ...
साउदी अरबको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनीमाथि मिसाइल आक्रमण
काठमाडौं । यमनका हुथी विद्रोहीहरुले साउदी अरबको एउटा ठूलो ऊर्जा केन्द्रमाथि शुक्रवार मिसाइल हमला गरेका छन्। साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धले पनि देशको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी आरामकोको जेद्दाहस्थित पेट्रोलियम उत्पादन तथा वितरण केन्द्रमा मिसाइल हमला भएको जनाएको छ। यस हमलापछि द...
काठमाडौं । चीनका स्टेट काउन्सिलर एवम् विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा छन् । शुक्रबार नेपाल आएका उनले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग औपचारिक भेटघाटसहित द्विदेशीय वार्तामा सहभागी भएका छन् । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे नेपाल ओर्लिएका मन्त्री वाङ बत्तीसपुत...
पोखरा विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । चीन सरकारद्वारा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज (शनिबार) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। चीन सरकारले नेपाललाई बालुवाटारमा आयाेजित एक कार्यक्रमबीच विमानस्थल हस्तान्तरण गरेकाे हो। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विमानस...
चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपालमा, यस्तो छ प्रधानमन्त्री देउवा, ओली र प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यक्रम
काठमाडौं । नेपालको भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले शनिबार औपचारिक भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। उनी शुक्रबार दिल्ली हुँदै काठमाडौं पुगेका थिए। चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले शुक्रबार कुनै कार्यक्रममा सहभागिता जनाएनन्। आज यीले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम ...
विश्व बैंकले नेपाललाई १८ अर्ब १५ करोड दिने
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको हरित, लचिलो र समावेशी विकास तथा स्थायित्व सुदृढ, वित्तीय समाधानमा विविधता ल्याइ वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका ...
पाकिस्तान र अफगानिस्तान भ्रमण सकेर नयाँ दिल्ली उत्रिए चिनियाँ विदेशमन्त्री
नयाँ दिल्ली । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली अवतरण गरेका छन्। मार्च २१ मा पाकिस्तान पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी मार्च २४ बिहान अफगानिस्तान पुगेका थिए। अफगानिस्ता भ्रमण सकेर बिहीबार बेलुका नयाँ दिल्ली उत्रिएका हुन्। भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच गलवान घाँटीमा भएको हिं...
युक्रेन युद्धका अबका तीन परिदृश्य, चीनले अहिल्यै कदम चाल्नुपर्छ
काठमाडौं । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण चौथो हप्तामा प्रवेश गर्दैगर्दा द्वन्द्वको कूटनीतिक समाधानका विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी हुनेसक्ने गाइँगुइँ सुनिएको थियो। जसअनुसार युक्रेनले भविष्यमा नेटोको सदस्यता लिने मनसाय त्याग्ने कुरा थियो। रुसले युक्रेनी सहरहरुमा निरन्तर बमबारी गरिरहेको छ। क्रिमिया र म...
अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई थप घातक हतियार सहयोग
काठमाडौं । अमेरिकाले रुसविरुद्ध लड्न युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । सहायता प्याकेजमा घातक हतियारहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार अमेरिकाले सहायता प्याकेजमा ८ सय एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ९ हजार आर्मर सिस्टम, ७ हजार साना हतियार र १०० वटा ड्रोन सहयोग गर्ने ...
जब युक्रेनमा हिँड्दै गरेका मानिस अगाडि क्षेप्यास्त्र खस्यो
किएभ । युक्रेनको राजधानी किएभमा पार्क छेउमा हिँड्दै गरेका एक जना मानिसको अगाडि क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको भिडिओ अनलाइनहरूमा पोस्ट भएको छ। रुसी फौजले धेरै युक्रेनी सहरहरूमा बमबारी जारी राखेको छ। राजधानी किएभको आवासीय क्षेत्रमा सोमवार भएको बमबारीमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो। अन...
युक्रेनको राजधानी नजिकै रुसी सेनाका गाडीको ४० माइल लामो लस्कर
काठमाडौं । युक्रेनको राजधानी सहर किभनजिकै ४० माइल लामो रुसी सेनाका गाडीको लस्कर देखिएको छ। किभभन्दा उत्तरतर्फको इभानकिभ सहर नजिकैबाट उक्त लस्कर सुरु भएको सार्वजनिक भएका तस्बिरहरुमा देखिएको छ। अहिले सार्वजनिक भएका स्याटेलाइट तस्बिरहरु सोमबार दिउँसोभन्दा पहिले लिइएको हो। तस्बिरमा रुसी सेन...
के युक्रेनमा पुटिनको योजना असफल भएको हो ?
काठमाडौं । भनिन्छ– युद्धअगाडि बनाइएका सारा योजना दुश्मनसँग जम्काभेट हुनेबित्तिकै भताभुंग हुन्छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको चार दिन भइसकेको छ। युद्ध सुरु भएको भोलिपल्टै राजधानी किभको बाहिरी भागसम्म पुगेको रुस अहिलेसम्म त्यो सहरमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। युक्रेनका प्रमुख सहरमध्ये कुनै पनि ...
संसारका सय प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक
काठमाडौँ । विश्वका एक सय प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक भएको छ। समाचार संस्था बीबीसीले वर्ष २०२१ का सबैभन्दा प्रेरक र प्रभावशाली १०० महिलाको सूची जारी गरेको हो। सूचीमा विश्वभरमा समाज र संस्कृतिलाई नयाँ सिराबाट बदल्न भूमिका निभाएका महिलाहरु अटाएको बीबीसीले जनाएको छ। यस वर्ष सबैभन्दा कम उ...
शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरू किन हिमालतिर?
अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाका राजदूत हिमाली क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किएर प्राकृतिक सौन्दर्यको अवलोकन मात्र गरिरहेका छैनन्। जलवायु परिवर्तनको असर र स्थानीय संस्कृतिको जानकारी पनि लिइरहेका छन्। काठमाडौं- विश्‍व शक्ति राष्ट्र अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाका राजदूतहरु यति बेला हिमाली जिल्ला मुगु पु...
बैंग्लोर । भारतको दक्षिणी प्रदेश केरलामा बाढीको कहर सुरु भएको छ । हालसम्म कम्तिमा ६ जनाको मृत्यु भइसकेको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् । बाढीबाट स्थानीय बासिन्दाको उद्धार र राहतका लागि सेना परिचालन गरिएको छ । दुईवटा जिल्लामा नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सका ११ वटा टोलीसहित सेना परिचालन गरिए...
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुल आचार्यले आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै आगामी दुई वर्षमा संघको सदस्य संख्या कम्तिमा पाँच लाख पुर्‍याउने र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको संख्या एक सय पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन् । असोज १० मा काठमाडौंमा विशेष समारोहको आयोजन...
एनआरएनए अध्यक्षमा रविना थापाको उम्मेदवारी घोषणा, नागरिकता र श्रमिक अधिकार मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि रविना थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् । हाल उपाध्यक्षसमेत रहेकी थापाले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी हुन् । उनले संघकाे २०२१-२०२३ कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दि...
काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसी सम्झौताका विषयमा नेपालको संसदले छिटो निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। आज (आइतबार) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले नेपाल सरकारकै आग्रहमा नेपालसँग एमसिसी सम्झौता भएको र नेपालमा अनुमोदन ...
काठमाडौँ । आगामी कात्तिक ६ देखि ८ गतेसम्म राजधानीमा आयोजना हुने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआएनए) को दशौँ विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन भएको छ। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्...
तालिबानले कब्जामा लियो अफगानिस्तान
काठमाडौँ । अफगानिस्तानलाई विद्रोही समूह तालिबानले कब्जामा लिएको छ। गएराति राष्ट्रपति कार्यालय प्रवेश गरेर उनीहरुले कब्जामा लिएको घोषणा गरेका हुन्। तालिबान लडाकु आइतबार बिहान मात्रै अफगानिस्तानको राजधानी काबुल छिरेका थिए। दिउसो सत्ता हस्तान्तरणका लागि वार्ता भएको थियो। सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्र...
काठमाडौँ । हालै बार्सिलोनाबाट बिदा भएका अर्जेटिनी खेलाडी लियोनेल मेसी फेन्च क्बल पिएसजीमा आवद्ध भएका छन्। पिएसजीको राखेको प्रस्तावमा सोमबार सहमति जनाउँदै उनले दुई वर्षका लागि सम्झौता गर्न लागेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाका अनुसार ३५ मिलियन युरोमा उनी पिएसजी भित्रिएका हुन्। पिएसजीले ...
टोकियो ओलम्पिक : चीन ७० पदकसहित शीर्ष स्थानमा
काठमाडौँ । जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा चीन ७० पदकसहित शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। अमेरिका र जापानलाई उछिन्दै चीन शीर्ष स्थान ओगट्न सफल भएको हो। चीनले हालसम्म ३२ स्वर्ण, २२ रजत र १६ कास्य पदक प्राप्त गरेको छ। अमेरिका दोस्रो तथा जापान तेस्रो स्थानमा रहेका छन...
नेपालसहित यी २६ देशका विद्यार्थीलाई कोरिया प्रवेश नगर्न सुझाव
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा डेल्टा भेरियन्टसहित कोभिड सङ्क्रमण दर उच्च भएपछि यहाँ अध्ययन गर्न आउने नेपाल लगायत विदेशी विद्यार्थीलाई तत्काल कोरिया प्रवेश नगर्न सुझाव दिइएको छ । पछिल्लो समय कोरियामा सङ्क्रमण दर उच्च देखिएपछि त्यहाँको सरकारले उक्त सुझाव दिएको हो । दक्षिण कोरियामा आगामी सेप्टेम्बरबा...
एनआरएनए अस्ट्रेलियाको अध्यक्षमा गुरुङ निर्वाचित
सिड्नी । एनआरएनए अस्ट्रेलियाको अध्यक्षमा नन्द गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। जुलाई ३१ शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको कार्यकालका लागि गुरुङ अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। ८ हजार ५ सय ८३ मत प्राप्त गर्दै गुरुङ विजयी भएका हुन्। उनका उनका प्रतिस्पर्धी डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले ४ हजार ८ सय ...
अस्ट्रेलियामा सेना परिचालन
अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले जारी लकडाउनमा थप कडाई गरेको छ । अस्ट्रेलियाका सिड्नी लगायतका शहरहरूमा जारी लकडाउनमा सर्वसाधारणले वेवास्ता गरेको भन्दै सिड्नी क्षेत्रमा सरकारले सडकमा सेना परिचालन गरेको छ । हालै परिचालन गरिएको अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्सका सैनिकहरू संक्रमण भएक...
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको संघीय राजधानी सिड्नीमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारी बढ्दै गएपछि त्यसको रोकथाम तथा न्यूनिकरण गर्नका लागि शुक्रबार संकटकाल घोषणा गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । केन्द्रीय राजधानी समेत पर्ने न्यु साउथ वेल्स प्रदेश सरकारले महामारी सुरु भएदेखिकै स...
नेपालसहित १६ देशका नागरिकलाई यूएई प्रवेशमा अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । यूएईले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको देशको सूचीमा यथावत राखेको छ । यूएईको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (जीसीएए)ले आइतबार नयाँ नियम जारी गर्दै नेपाललाई ‘रेड जोन’मै राखेको हो । यससँगै नेपाली नागरिकलाई यूएईले आफ्नो देश प्रवेशमा लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध अनिश्चितकालका लागि लम्बिएको ...
अफगानी महिलाले किन उठाए हतियार ?
काबुल (अफगानिस्तान) । 'अफगानी महिलाहरू तालबान समूहबाट कुनै पनि राम्रो काम हुने अपेक्षा नै गर्दैनन्। हामी न त विश्वविद्यालय जान सक्छौँ, न त हामीलाई कुनै काममा जाने अनुमति छ। यसकारण महिलाहरू अब अघि बढेका छन् र देशको राष्ट्रिय सेनलाई समर्थन गरिरहेका छन्। यसको कारण भने तालिबानी कारबाहीमा रोक लाग्न सको...
काठमाडौँ । युरोकपमा स्वीडेनले स्लोभाकियालाई १-० गोल अन्तरले हराएको छ । शुक्रबार समूह ‘ई’ अन्तर्गत रुसमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी रोकिएपनि ७७औं मिनेटमा स्लोभाकियाका गोलकिपर मार्टिन डुब्राभ्काले रोबिन क्याएसेनमाथि पेनाल्टी एरियामा फाउल गरेपछि स्वीडेनले पेनाल्टी पाएको थियो । सोही प...
युरोकप २०२० : अस्ट्रियालाई २–० ले हराउँदै नेदरल्याण्ड्स अन्तिम १६ मा प्रवेश
काठमाण्डाै । नेदरल्याण्ड्स युरो कप फुटबलको अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । गएराति भएको खेलमा अस्ट्रियालाई २–० गोलले हराउँदै नेदरल्याण्ड्स नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो । नेदरल्याण्ड्सको जितमा ११ औं मिनेटमा मेम्फिस डिपेले पेनाल्टीमार्फत र डेञ्जल डुम्फ्रिजले ६७ औं मिनेटमा गोल गरे । समूह 'सी' को गएरात...
टर्कीविरुद्ध वेल्सको सानदार जित
काठमाडौँ । वेल्सले जारी युरोकपमा पहिलो जित हात पारेको छ। बुधबार राति टर्कीलाई २–० ले पराजित गर्दै वेल्सले पहिलो जित निकालेको हो। अजरबैजनको बाकुमा भएको खेलमा वेल्सका लागि आरोन राम्जी र कोनर रोबट्र्सले समान एक–एक गोल गरे। दुवै गोलमा ‘म्यान अफ द म्याच’ भएका ग्यारेथ बेलको एसिस्ट रहेको थियो। राम्जीले...
काठमाडौँ । सोमालियाको राजधानी मोगादिशुस्थित सैनिक तालिम केन्द्रमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । प्रहरी प्रवक्ता सदिक अलि अडेनले विस्फोटक पदार्थ राखिएको भेस्ट लगाएका एक आत्मघाती हमलाकारी प्रशिक्षार्थीको भेषमा तालिम केन्द्रमा प्रवेश ...
युरोकप पोर्चुगलसँग हंगेरी ३–० ले पराजित, रोनाल्डो बने युरोकपका सर्वाधिक गोलकर्ता
काठमाडौँ । स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले युरोकप २०२० अन्तर्गत हंगेरीविरुद्ध भएको समूह चरणको पहिलो खेलमा दुई गोल गर्दै पोर्चुगललाई ३–० को जित दिलाएका छन्। पोर्चुगलका लागि सुरुवाती गोल भने राफाएल गुएरेरोले गरेका थिए । सो खेलमा रोनाल्डोले दुई मुख्य रेकर्ड राख्न सफल भएका थिए भने त्यसबाहेक ...
कोपा अमेरिका: अर्जेन्टिनालाई चिलीले १-१ गोलको बराबरीमा रोक्यो
काठमाडौँ । कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना बराबरीमा रोकिएको छ। मंगलबार विहान सम्पन्न समूह 'ए' को खेलमा अर्जेन्टिनालाई चिलीले १-१ गोलको बराबरीमा रोकेको हो। खेलको ५७ मिनेटमा चिलीले बराबरी गोल फर्कायो। प्राप्त पेनाल्टी चिलीका भिदालले प्रहार गरेका थिए। सो पेनाल्ट...
युरो कप : यी हुन् यो संस्करणमा छाउन सक्ने पाँच स्टार
युरोकपको १६औं संस्करणको युरोपका विभिन्न ११ सहरमा जारी छ। मंगलबारबाट युरोकपका समूह चरणका पहिलो चरणका खेल सकिँदै छ। पहिलो चरणका दुई खेलमात्र बाँकी रहँदा अपेक्षा अनुसारनै ठूलो टिम र स्टार खेलाडीहरुले गोल गरिरहेका छन्। जसमा बेल्जियमका रोमेलु लुकाकुदेखि इंग्ल्यान्डका रहिम स्टर्लिङ छन्। क्लब फुटबलमा लग...
भारतमा दैनिक ८० हजार जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ। भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाभाइरसबाट थप ८० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार थप ८० हजार ८३४ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । “एकैदिनमा यति मानिस सङ्क्रमित भएको ७१ दिन पछिकै सबैभन्दा थोरै हो,” केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिव...
पाकिस्तानमा भारी वर्षा र हुरी, कम्तिमा दश जनाको मृत्यू
काठमाडौँ । पाकिस्तानको विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षा र बतासको कारण कम्तिमा १० व्यक्तिको ज्यान गएको छ । खराब मौसमका कारण खैबर पख्तूनख्वामा पाँच, बलूचिस्तानमा तीन र दुई जनाको पञ्जाबमा मृत्यु भएको हो । खैबर पख्तुनख्वाको प्रान्तीय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण (पीडीएमए) का अनुसार, वर्षासँग सम्बन्धित वि...
कोपा अमेरिका: ब्राजिलसँग भेनेजुएला ३–० ले पराजित
काठमाण्डाै । कोपा अमेरिका फुटबलमा ब्राजिलले विजयी सुरुवात गरेको छ । आज बिहान सकिएको खेलमा ब्राजिलले भेनेजुएलालाई ३–० गोलले हराएको हो । ब्राजिलका लागि नेयमार, ग्राबियल बार्वोसा र मोरक्विनोले गोल गरे। नेयमारले पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन् । ब्राजिलले २३ औं मिनेटमा गोलको सुरुवात गरेको थियो ।...
तेस्रो पटक युरोकप खेलिरहेको अष्ट्रियाको पहिलो जित
काठमाडौं । अष्ट्रियाले युरोकप फुटबलमा पहिलो जित हात पारेको छ । तेस्रो पटक युरोकप खेलिरहेको अष्ट्रियाले १६औं संस्करण अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा नर्थ मेसेडोनियालाई ३-१ ले पराजित गरेको हो । समूह सीमा अष्ट्रियाले जितसहित ३ अंक जोड्दा यसै संस्करणबाट युरोकपमा डेब्यु गरेको नर्थ मेसेडोनियाको सुरुवात सु...
खोप उपलब्ध गराउन बेलायत सरकारलाई पत्र पठाउने तयारी
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले कोभिड–१९ विरुद्धको ‘एस्ट्राजेनिका’ खोप उपलब्ध गराउन बेलायत सरकारलाई पत्र पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । सञ्चारकर्मीसंग आज कुराकानी गर्दै उनले नेपालका ज्येष्ठ नागरिकले खोप अभावका कारणले दोस्रो मात्राको खोप लगाउन नपाएको कुरा उल्ले...
युरो २०२०: क्रिस्टियन एरिक्सन खतरामुक्त
काठमाडौ । खेलको ४२ औं मिनेटमा मैदानको टचलाइन छेउमा एक्लै हिँडिरहेका थिए क्रिस्टियन एरिक्सन। उनी आफूमा सन्तुलन गुमाउँदै त्यही बेहोस भए। त्यसपछि उनका टिममेटले उनलाई घेरिहाले। साथै उनीहरुले मेडिकल टिम बोलाउन आग्रह गरेपछि तुरुन्त मेडिकले मैदान प्रवेश गर्यो। यससँगै युरोकपको तेस्रो खेल सुखद् बनेन। डेनम...
भारतमा कोरोना: पछिल्लो २४ घण्टामा ९१ हजार २६६ जना संक्रमित थपिए, ३४०२ जनाको मृत्यू
काठमाडौं । भारतमा दैनिक रुपमा उच्च संख्यामा बढिरहेको कोरोना संक्रमण पछिल्ला दिनमा ओरालो लाग्न थालेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको भारतमा संक्रमण ओरालो लागे पनि मृतकको संख्या भने घटेको छैन। पछिल्लो २४ घण्टाभित्र त्यहाँ ९१ हजार २६६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमित संख्याका आधा...
जर्मनीले पठाएका स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौ आइपुग्यो, के-के छन् ? [फोटोफिचर]
काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाल सरकारलाई कोभिड – १९ विरुद्ध आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गरे। जर्मनीले प्रदान गरेको स्वास्थ्य स...
भारतमा मोदीको घोषणा : ८० करोड नागरिकलाई सित्तैमा खानेकुरा, १८ वर्ष माथिकालाई निःशुल्क खोप
दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउने नोभेम्बरसम्ममा ८० करोड नागरिकलाई सित्तैमा खानेकुरा दिने घोषणा गरेका छन्। सोमबार साँझ देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले कोरोनालाई पछिल्लो शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो महामारी भएको भन्दै गरीब कल्याण योजनाअनुसार दिइँदै आएको निःशुल्क रासनको समयावधि बढा...
काठमाडौँ । दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको भारतमा संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा उल्लेख्य कमी आएको छ । डेढ महिना अघिसम्म लगातार ४ लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ १ लाख १ हजार २३३ जनामा संक्रमण भएको छ । पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या २ करोड ८९ लाख ९ हजार ...
बेलायती मिडियालाई कोरोनाबारेको समाचार सच्याउन नेपाली दूतावासको पत्र
काठमाडौ । बेलायतको लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले बिहीबार ‘डेलीमेल’ले प्रकाशित गरेको समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। डेलीमेलले बेलायतीहरूको बिदालाई नेपाल भेरियन्टको खतरामा परेको भनी समाचार प्रकाशन गरेको थियो। समाचार आधारहीन रहेको र नेपालमा अहिलेसम्म अल्फा, डेल्टा भेरियन्ट फेला परेको दूतावासले जनाएको छ।...
नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिएको छैन : डब्लुएचओ
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नेपालमा कोरोना भाइरसको कुनै नयाँ भेरियन्ट नदेखिएको बताएको छ। बेलायती अखबार ‘डेली मेल’ ले बिहीबारको संस्करणमा ‘हाम्रो बिदालाई नेपाल भेरियन्टको खतरा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसमा प्रकाशित समाचारमा नेपालमा उत्पत्ति भएर युरोपभरि फैलि...
अमेरिकाले नेपालसहितका १६ मुलुकलाई ७० लाख डोज कोभिड-१९ खोप उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । कुल दुई करोड ५० लाख डोज खोज विभिन्न मुलुकमा उपलब्ध गराउने घोषणा अमेरिकाले गरेको हो । त्यसमध्ये ७० लाख डोज नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइ...
दिल्ली । भारतको जम्मु–काश्मीरमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक नेताको गोली हानी हत्या गरिएको छ। बुधबार राति भाजपा नेता तथा त्राल नगरका पार्षद् राकेश सोमनाथ पंडितामाथि पुलवामामा गोली हानिएको जम्मु–काश्मीरका प्रहरी प्रमुख विजय कुमारले बताएका छन्। उनी आफ्ना साथीभाइसँग भेटघाट गरिरहेका बेला गोली ह...
एजेन्सी । जापानले पाँच मिनेटमा नै कोभिड १९ को सङ्क्रमण भए/नभएको बारेमा थाहा पाउने प्रविधि पत्ता लगाएको जनाएको छ । जापानको रिकेन रिसर्च इन्स्टिच्युट र युनिभर्सिटी अफ टोकियोले गरेको अनुसन्धानबाट सो प्रविधि पत्ता लगाइएको बताइएको हो । यहाँका राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले मङ्गलबार यो समाचार सार्वजनि...
विश्वभर अहिलेसम्म १७ करोड मानिसमा कोरोना संक्रमण, भारत दोश्रो स्थानमा
एजेन्सी । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा सङ्क्रमितको संख्या सत्र करोड १२ लाख ५१ हजार ५३ रहेका छन् । सो विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार अत्यन्त प्रभावित देशहरूका सङ्क्रमित नागरिकहरुको संख्या यसप्रकार रहेका छन् । देश ...
‘अज एस्किलपियस’ले पठायो एक सय थान हाइड्रोजन अक्सिजन जेनेरेटर
काठमाडौँ । चीन सांघाईमा रहेको प्रशिद्ध स्वास्थ्य कम्पनी अज एस्किलपियसले उपलब्ध गराएको सय थान हाइड्रोजन अक्सिजन जेनेरेटर बुधबार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी मार्फत नेपाल भित्रिएको छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि चिनिया कम्युनिष्ट पाटीको आग्रहमा अज एस्किलपियस कम्पनीले उल्लेखित अत्याधुनिक प्रविधि...
चीनले अनुदानमा पठाएको आठ लाख भेरोसिल काठमाडौँ आइपुग्यो
काठमाडौं । चीन सरकारले अनुदानमा दिएकोमध्ये ८ लाख डोज खोप मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको छ । मंगलबार नेपाल एयरलाइन्सको विमानले ८ लाख डोज खोप त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अघिल्लो हप्ता भएको कुराकानीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा ग...
‘ट्रिप्स कानून’ खारेजीमा समर्थन जनाउन प्रधानमन्त्रीलाई ट्रेड युनियनले पठाए पत्र
काठमाडौँ । नेपालका ट्रेड युनियन महासंघहरुले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मार्फत् फर्मास्युटिकल क्षेत्रको ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्टस अफ ईन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राईटस (ट्रिप्स) कानून निलम्बनमा समर्थन जनाउन आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्र्रिय ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेसनसम्बद्ध राष्ट्रिय समन्वय समित...
अमेरिकामा गोली चल्यो, कम्तिमा दुई जनाको मृत्यु, २० जनाभन्दा बढी घाइते
एजेन्सी । फ्लोरिडाको मियामीमा आइतबार बिहान गोली चल्दा कम्तिमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने २० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। स्थानीय प्रहरीका अनुसार स्पोर्ट कारमा आएका तीन व्यक्तिले कारबाट बाहिर निस्केर भीडमा अन्धाधुन्ध गोली हानेका थिए । आइतवार बिहानमा एल मुला बैंक्वेट हलको बाहिरपट्टी उक्त गोली काण...
भारतमा थप १ लाख ७४ हजारमा संक्रमण
काठमाडौँ । दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको भारतमा संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी हुँदै गएको छ । डेढ महिना अघिसम्म लगातार ४ लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ १ लाख ७४ हजार ४१ जनामा संक्रमण भएको छ । यो संख्या शनिबारको तुलनामा ३ हजारले बढी हो । पछिल्लो वृद्धिसँगै भारत...
काठमाडौं । इंग्लिस क्लब चेन्लसीले च्याम्पियन्स लिग २०२०–२१ को उपाधि जितेको छ। पोर्टोको डो ड्रागो रंगशालामा शनिबार राति सम्पन्न खेलमा अर्को प्रिमियर क्लब म्यानचेस्टर सिटीलाई हराउँदै चेल्सीले उपाधि जितेको हो। जितका लागि कई हभाट्जले पहिलो हाफमा निर्णायक गोल गरे। मेसन माउन्टले दिएको बललाई सदुपयो...
अमेरिकाका राष्ट्रपति वाइडेनलाई राष्ट्रपति भण्डारीको पत्र, ‘कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि पहल गर्न आग्रह’
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाललाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दै अमेरिकी समकक्षी जोइ बाइडेनलाई पत्राचार गरेकी छन् । नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले राष्ट्रपतिको पत्र अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका बरिष्ठ सल्लाहकार एर्भिन मासिंगालाई बुझाएका छन्। ...
बेलायतले पठायो अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री
काठमाडौं । बेलायत सरकारले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि २६० वटा भेन्टिलेटर र भेन्टिलेटरका लागि आवश्यक अन्य सामग्री तथा फेस शिल्ड सहयोग गरेको छ। लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावसका अनुसार बिहीबार अपराह्न सामानसहित बेलायतबाट विमान पठाइएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ यूके तथा नेपाली राजदूत...
चीनले नेपाललाई १० लाख खोप दिदा भारतलाई नैतिक संकट
काठमाडौं । चीनमा समकक्षी सी जीन फिङसँग नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टेलिफोन सम्वाद गरेपछि चीन सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ । नेपालस्थित चिनीयाँ राजदूत होउ यान्छीले सामाजिक सञ्चाल ट्वीटरमार्फत दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखबीच भएकोसंवादपछि चीन सरकारले नेपाललाई १० लाख ड...
राष्ट्रपति भण्डारीको चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग फोनवार्ता: दश लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड– १९ विरुद्धको खोपका लागि बुधबार कूटनीतिक सक्रियता देखाएकी छिन् । उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद गरेकी छिन् भने भारतीय समकक्षी रामनाथ कोबिन्दलाई चिठी पठाएकी छिन् । चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाललाई थप १० लाख डोज खोप अनुदानमा उप...
भारतमा संक्रमण घटे पनि घटेन मृत्यु दर, मृतक संख्या ३ लाख नाघ्यो
काठमाडौँ । दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको भारतमा संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा दुई साता यता कमी आएको छ । लगातार ४ लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २ लाख २२ हजार ८३५ जनामा संक्रमण भएको छ । यो संख्या आइतबारको तुलनामा झण्डै २२ हजारले कम हो । पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक...
भारतमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मृत्यु, एकैदिनमा ४,५०० ले ज्यान गुमाए
दिल्ली । कोरोनाभाइरस संक्रमणको कारण भारतमा अहिलेसम्मकै धेरैजनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा पछिल्लो ४ हजार ५ सय २९ जनाको मृत्यु भएको छ । दैनिक मृत्यु हुनेको संख्यामा भारतले अमेरिकालाई समेत उछिनेको छ । संक्रमण दर घटेपनि भारतमा मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आएको छैन । थप २ लाख ६७ हजार ३...
हिन्द महासागरमा जहाज डुब्यो, १४६ जना बेपत्ता
मुम्बइ । तुफानका कारण हिन्द महासागरमा जहाज डुबेको छ । मुम्बईभन्दा १७५ किलोमिटर टाढाको सो हिरा आयल फिल्ड्सको नजिकै फसेको भारतीय जहाज समुन्द्रमा डुबेको हो । सो जहाजमा २ सय ७६ जना रहेकोमा १ सय ४६ जनाको भारतीय जल सेनाले सकुशल उद्दार गरेको छ । १ सय ३० जना भने अझै हराइरहेका छन् । यही क्षेत्रमा अ...
डब्लुएचओ, ‘गरिब मुलुकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराऔँ’
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरिब मुलुकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन धनी देशहरुसँग आग्रह गरेका छन् । केही धनी मुलुकहरुले साना बच्चाको लागि समेत खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको बेला विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ) ले सो योजनामा पुर्नविचार गर्न र गरिब मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् । ...
अफ्रिकामा ४६ लाख बढी कोरोना स‌ंक्रमित
अदिस अबाबा । अफ्रिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या ४६ लाख नाघेको छ। अफ्रिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म अफ्रिका महादेशमा ४६ लाख ७७ हजार ७सय ९८ जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितमध्ये ४२ लाख ३२ हजार ९ सय ७४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । अहिलेसम्म अफ्रिकामा कोरोनाका कार...
११ देशका लागि राजदुत सिफारिस (सूचीसहित)
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ मुलुकमा तीन वर्षदेखि रिक्त राजदूत नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको छ । अष्ट्रिया, इजिप्ट, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, रूस, बर्मा, बहराइन, ब्राजिल, डेनमार्क र साउदी अरेबियाका लागि परराष्ट्रले ११ जनाको नाम राजदूतको प्रस्ताव गर्दै सिफारिस गरेको हो...
काठमाडौं । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई यतिबेला चुनाव लागेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को आसन्न निर्वाचनका उम्मेदवारहरु प्रचार अभियानमा व्यस्त छ । यसैबीच एनआरएन अमेरिकाको एनसीसीको महासचिवका लागि दोलखा घर भई नर्थ क्यारोलिना बस्दै आएका नवराज सुवेदीले प्र...
कोरोना बढेपछि जारी आईपीएल स्थगित
एजेन्सी । भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड, बीसीसीआईले अन्ततः इण्डियन प्रिमियर लिग, आइपिएलको जारी सिजन स्थगित गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बीसीसीआईले आईपिएल टोलीका खेलाडी र सहयोगिहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि थप जोखिम उठाउने अवस्था नरहेको भन्दै प्रतियोगिता स्थगित गरेको जनाएको हो । पछिल्लो दु...
काठमाडौं । विश्वभर अहिलेसम्म १३ करोडभन्दा धेरै मानिस कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म १३ करोड १ लाखभन्दा धेरै निको भएको कोरोनाबारे विश्वब्यापी तथ्यांक अध्यावधिक गरिरहेको वल्र्ड ओ मिटरले जनाएको छ । वल्र्ड ओ मिटरक...
पाकिस्तानमा बम विस्फोटबाट चारजनाको मृत्यु, ११ घाइते
काठमाडौं । पाकिस्तानको क्वेटा सहरस्थित एक होटलमा बम विस्फोट हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ। ११ जना घाइते भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार क्वेटा सहरको चर्चित होटल सेरेनाको पार्किङ क्षेत्रमा बम विस्फोट भएको हो। उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारी आउजाउ गर्ने सेरेना होटल पाकिस...
विमस्टेकको १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक अप्रिलमा
काठमाडौं । वहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास (विमस्टेक) को १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक अप्रिल १ मा हुने भएको छ । श्रीलंकाको विदेश मन्त्रालयले आगामी अप्रिल १ मा १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकका लागि सबै सदस्य मुलुकलाई निमन्त्रणा पठाइएको ...
कोरियामा कोरोना परीक्षण नगर्नेलाई ३० लाखसम्म जरिवाना हुने
सउल । दक्षिण कोरियाको ख्याङ्गिदो प्रान्तमा बसोबास गर्ने सबै विदेशीलाई स्थानीय सरकारले अनिवार्यरूपमा कोभिड–१९ परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय प्रशासनले यही मार्च २२ तारिख (चैत ९ गते) भित्र यहाँ रहेका सम्पूर्ण विदेशीलाई अनिवार्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो । स्थानीय प्रशासनको निर्दे...
काठमाडौँ । अमरिकाका ४६औँ राष्ट्रपतिको पद सम्हालेलगत्तै जो बाइडेनले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका केही निर्णय उल्टाएका छन् । क्यापिटल हिलमा बुधबार आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रमपछि ह्वाइटहाउस पुगेका बाइडेनले विभिन्न १५ निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको बिबिसीले जनाएको छ । ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा जलव...
काठमाडौँ । अमेरिकामा २ करोड ४६ लाखभन्दा धेरैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख ४२ हजार २२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि २७ मंसिरमा एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै ३ लाख ८६ हजार ६५४ जनामा संक्रमण भएको थियो । पछिल्लो वृद्धिसँगै अमेरिकामा संक्रमितको संख्या २ करोड ४...
भारतमा सवा दुई लाखलाई कोरोनाविरुद्धको खोप, खोप लगाएका ४४७ जना बिरामी
काठमाडौँ । भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप धमाधम लगाइएको छ। खोप लगाउने सयौं जना बिरामी पनि परेका छन्। भारतमा शनिबारदेखि खोप लगाउन थालिएको हो। दुई दिनमा दुई लाख २४ हजार तीन सय एक जनालाई खोप लगाइएको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये चार सय ४७ जना बिरामी परेका हुन्। खोप लगाउनका लाग...
एजेन्सी । १० जना नेपालीको पर्वताराेही टीमले इतिहास रचेका छन् । पाकिस्तानमा रहेको विश्वको दोश्रो सबैभन्दा अग्लो हिमाल केटु आरोहण गरेर उनीहरुले विश्व रेकर्ड बनाएका हुन् । टीमका एक सदस्य निर्मल पुर्जाका अनुसार उनीहरु पाकिस्तानी समय अनुसार साँझ ५ बजे केटु हिमालको शिखरमा पुगेका थिए । उनीहरुले ८ हजार ६...
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोसियल मिडियाको विकल्प खोज्न थालेका छन् । गत साता क्यापिटल हिलमा भएको हिंसात्मक गतिविधिपछि सोसियल मिडिया फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामले ट्रम्पका सबै खाता सधैँका लागि बन्द गरेपछि उनी यस्ता मिडियाको विकल्पको खोजीमा लागेका हुन् । ट्रम्पले सोसियल मिडिया...
समुन्द्रमा खस्यो विमान ६२ जना बोकेको विमान
काठमाडौं । इण्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट उडान भरेको केही समयमै सम्पर्कविहीन भएको विमान समुन्द्रमा खसेको आशंका गरिएको छ । श्रीविजया एयरको बोइङ ७३७ जाकार्ताबाट वेष्ट कलिमनतन प्राप्तको आकासमा पुग्दा सम्पर्कविहीन भएको थियो । २६ वर्ष पुरानो यो विमानमा ६२ जना सवार थिए । ५६ यात्रु थिए, जसमध्ये ३...
पोर्चुगलमा एक नेपाली युवकले गरे आत्महत्या
लिस्वन । पोर्चुगलमा एक जना नेपाली युवकले आत्महत्या गरेका छन्। लिस्बनमा आफू बसेको छात्रावासबाट हाम फालेर बझाङका सुरत कुँवरले आत्महत्या गरेका हुन्। पोर्चुगललाई कर्मथलो बनाउँदै आएका उनी शुक्रबार नेपाल जाने तयारीमा थिए। फेसबुकमा ‘मिल्ने भए दुःख हटाई खुशी किन्थेँ आमा, आफ्नो को हुन् पराइ को हुन् सबै च...
अमेरिकाको माथिल्लो सदनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीको बहुमत
अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले बहुमत बनाएको छ। जर्जिया राज्यमा मंगलबार फेरि गरिएको दुई सिनेटको निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिकका उम्मेदवार विजयी भएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । दुई सिट जितेसँगै सिनेटमा डेमोक्र्याटिक सिनेटरको संख्या ५० पुगेको छ । मंगलबारको चुनावमा डेमोक्र...
लण्डन । नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस फैलिन थालेपछि बेलायतमा फेरि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सोमबार देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्नु भएको हो । उहाँले लकडाउन फेब्रुअरी मध्यसम्म लागू हुने जानकारी दिनुभयो । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र भएपनि बेलायतमा नयाँ ...
ब्राजिलको बेरोजगार दर १४.३ प्रतिशत
रियो दि जेनेरियो । कोरोना भाइरस महामारीको कारण संकुचित बनेको ब्राजिलको बेरोजगारी दर थोरै घटेर १४.३ प्रतिशत पुगेको मंगलबार सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थामा अगस्ट–अक्टोबरको अवधिमा अघिल्लो त्रैमासिक तुलनामा ०.३ अंकले घटेको हो । ब्राजिलले तीन महिना...
कोरोना भाइरसबारे बोल्ने चीनकी एक ‘नागरिक पत्रकार’ लाई ४ वर्ष जेल
एजेन्सी । चीनमा कोरोना भाइरसबारे आम मानिसलाई जानकारी दिने एक ‘नागरिक पत्रकार’ लाई त्यहाँको एक अदालतले ४ वर्ष जेल सजायँ सुनाएको छ। ३७ वर्षीया पूर्व वकिल झाङ झानलाई ‘नागरिकलाई त्रसित बनाउने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरेको’ आरोपमा ४ वर्ष जेल सजायँ सुनाइएको हो। गत वर्ष वुहान सहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण...
बाइडेनले लगाउने भए कोरोनाविरुद्धको खोप
अमेरिका । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने भएका छन् । उनले सोमबार टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा समेत आफू खोप लगाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका थिए । मोडर्नाले उत्पादन गरेको खोप उनले अमेरिका ल्याएकै दिन लगाउने घोषणा गरेका हुन् । अमेरिका ल्याइएको यो दोस्...
संसारका सय उत्कृष्ट नर्स तथा मिडवाइफको सूचिमा नेपालका चार
नेपालका चारजना युवती संसारकै सर्वोत्कृष्ट मिडवाइफ र नर्सको एकसय सूचिमा छानिएका छन् । नर्स एवं मिडवाइफ अन्तराष्ट्रिय वर्ष २०२० को अवसरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यी नेपाली नर्सलाई छानेको हो । रुक्मणी त्रिपाठी दुर्गा सापकोटा प्रशंसा बुढा लामा सूचिमा नेपालबाट दुईजना मिडवाइफ र दुईजना नर्स...
पाकिस्तानले ल्यायो बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानुन
पाकिस्तानले बलात्कारका दोषीलाई नपुंसक बनाउने कडा कानुन ल्याउने भएको छ। नयाँ कानुनले यससम्बन्धी मुद्धामा शीघ्र सुनुवाइसँगै कडा सजायको व्यवस्था गरेको हो। नयाँ कानुनमा दोषी प्रमाणित भए रसायनिकरूपमा नपुंसकसम्म बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। मंगलबार पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्बीले यससम्बन्...
वाइडेनको पहिलो अभियान, ‘एक सय दिन मास्क लगाऔँ’
वासिङ्टन । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको रुपमा आफ्नो पहिलो काम मास्क सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्ने भएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकाल शुरु भएसँगै सबै अमेरिकीलाई मास्क लगाउन आह्वान गर्दै “सय दिन मास्क लगाऔँ” अभियान चलाउने बिहीबार जानकारी दिएका छन् । वर्तमान राष...
काठमाडौँ | जापानको वेरोजगार दर अक्टोबरमा तीन वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको यहाँको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । वेरोजगार दर वृद्धि हुनुलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमणजन्य महामारीसँग जोडेर हेरिएको छ । महामारीका कारण व्यवसायिक गतिविधि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको र यसको प्रभाव रोजगार क्षेत्रमा पनि परेको ...
बीबीसी- जो बाइडन अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। डेमाक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडन अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपति बन्नका लागि आवश्यक मत हासिल गर्न सफल भएका छन्, तर उनका सामु कानुनी चुनौतीहरू भने बाँकी छन्। सन् २००९ देखि सन् २०१७ सम्म बाराक ओबामाका उपराष्ट्रपति रहेका बाइडन दश...